SAVA (vf) | cco-covid19.gov.mg
MESURES PRISES PAR L’ETAT
PAR GROUPE SECTORIEL
A PROPOS DE LA PANDÉMIE
Nouveaux cas: 05
Nouveaux guéris: 07
Formes graves: 0
Cumul | 29 Septembre 2020
DISTRICTS: Andapa, Antalaha, Sambava, Vohemar
805 300 hab. (2004)
2 551 800 ha = 25 518 km2
TAUX DE POSITIVITE
TAUX DE GUERISON
BENEFICIAIRE VATSY TSINJO
BENEFICIAIRE TOSIKA FAMENO
ménages (source FID)
NOMBRE DE DISPOSITIF DE LAVAGE DE MAIN MISE EN PLACE (DLL)
LES MESURES PRISES POUR LA REGION SAVA
FITANDREMANA FOTOTRA SY ANKAPOBENY
Arovava sy orona
Elanelana iray metatra
Fandrarahana fanafody mamono otrik’aretina
Fanasana tanana matetika
Tsy maintsy manao arovava-orona ny olon-drehetra rehefa mivoaka ny trano.
Ny tsy fanajana an’izany dia mahavoasazy hanantanteraka Travaux d’Intérêt Général.
Tsy maintsy hajaina ny elanelana iray metatra.
Hatao ny fandrarahana fanafody mamono otrik’aretina amin’ireo toerana izay hita fa nisian’ny tranga vaovao.
Sasana matetika amin’ny savony sy amin’ny gel désifectant ny tanana.
Fanantonana ny tobi-pahasalamana
Atao ny fakana maripana amin’ny fidirana any amin’ireo toerana samihafa: fiangonana, biraom-panjakana …
Ilaina ny fanantonana ny tobi-pahasalamana raha misy ny ahiahy na soritr’aretina.
Tsy tokony hivezivezy eny ivelan’ny trano na eny an-dàlambe raha tsy misy antony manokana.
Tokony hanaja ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ny toerana rehetra hivezivezen’ny vahoaka toy ny tsenam-pokontany, ny birao-mpnajakana, ny toerana fandraisan’olona rehetra…
Mbola voarara ny famoriam-bahoaka mihoatra ny 200 olona.
Tsy mbola misokatra ihany koa ny fifaninana ara-panantajahan-tena manerana ny nosy.
Azo atao anefa ny fanazaran-tena fa ny fifaninanana mamory olona no tsy mbola azo atao.
Couvre feu: amin’ny 12 ora alina na misasakalina hatramin’ny 04 ora maraina ho an’ny faritra Analamanga sy ny faritra DIANA.
Ny fitondrana razana dia omena alàlana na ny mivoaka na ny miditra ny faritra Analamanga raha ohatra ka voamarina avy amin ‘ny sampan-draharaham-panjakana misahana an’izany fa tsy ny Covid-19 no nahafaty.
Mbola tsy azo atao ny famadihana.
Misokatra manomboka ny Asabotsy 26 Septambra ho avy izao ny zotra mampitohy an’Antananarivo sy Antsiranana, ary ny mampitohy an’Antananarivo sy Sambava ihany koa;
Apetraka mandrakariva ny manifolds eny amin’ny toby fiaingana sy toby fiantsonana rehetra ary tsy maintsy fenoina antsakany sy andavany raha misy ny fidinana na fialana eny an-dalana.
Ny mpitandro ny filaminana no manao fanaraha-maso eny an-dalana raha toa ka misy mpandeha miakatra na midina eny an-tenatena-dalana.
Tsy maintsy andrarahana ranom-panafody famonoana otrikaretina ny fiara fitaterana rehetra alohan’ny fiaingany isan’andro ary tsy maintsy misy gel desinfectant avokoa ao anatin’ny fiara .
Mila manao masque na arovava-orona ny mpandeha rehetra.
Tsy misondrotra ny saram-pitaterana rehetra.
Ny ministera miahy ny fitaterana, ny faritra tsirairay, ny koperativa sy ny mpitatitra no mandamina an-tsakany sy an-davany ny fampadehanan’ireo zotra nasionaly ireo.
Manohy ny asany ny taxibe rehetra na urbaine na suburbaine ary tsy maintsy hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana :
Fampiasana ny gel desinfectant eo amin’ny fidirana sy fivoahany fiara
Tsy maintsy manao arovava-orona ny ao anatin’ny fiara
Tsy maintsy manao visière ny mpamily sy ny resevera ary mila apetraka tsara, manankona ny tarehy izany.
Tsy fampiasana seza volamena na strapontin.
Tsy maintsy andrarahana ranom-panafody famonoana otrik’aretina ny fiara fitaterana rehetra alohan’ny fiaingany isan’andro.
Ny fotoana fiasana dia mifarana amin’ny 09 ora alina.
Tsy miova ny sara-pitaterana na ny frais.
Mitohy miasa ny Taxi ville na ny fiarakaretsaka.
Hajaina hatrany ny fitondrana olona 03 farafahabetsany ary tsy maintsy mitondra masque na arovava- orona ny mpandeha sy ny mpamily.
Azo atao ny mitondra olona iray amin’ny moto na bisikileta raha ohatra ka fianakaviana: vady na zanaka ilay hoentina ary voaporofo rehefa manao fisavana ny mpitandro filaminana.
Fitaterana an’habakabaka anatiny sy ivelany
Mitohy ny fisokafany sidina anatiny eto amintsika izay iantsorohany Companie Tsaradia
Hajaina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana miankina amin’ny rindrandamina apetraky ny ministera mpiahy ny fitaterana, ny compagnie Tsaradia , ny mpandeha tsirairay ary ireo mpisehatra rehetra amin’ny fitaterana an’habakabaka.
Sokafana miandalana ihany koa ireo aeroport hafa any amin’ny faritra mandray sidina avy any ivelany ka ny sidina ato anatin’ny ranomasimbe Indianina no hanombohana azy. Toy izao ny lamina apetraka:
Hisokatra amin’ny sidina avy amin’ny nosy manodidina ny aeroport ao Antsiranana, Toamasina, Taolgnaro, Toliara manombokan ny faha-29 ny volana Oktobra ho avy izao. Ny ministera miahy ny fitaterana, ny companie Tsaradia, ireo compagnie mpitatitra avy any ivelany, ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny fitaterana an’habakabaka dia tsy maintsy mametraka ny rindrandamina ilaina ahafahana manokatra sy mandray ireo sidina ireo izany dia ao anatin’ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pilaminana iraisam-pirenena mifandray amin’izao valanaretina COVID-19 izao.
Fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy
Afaka miasa manomboka izao ireo mpitatitra olona an-dranomasina sy an-dranomamy
Ny fitaterana anatiny no omen-dalana fa mbola tsy azo atao ny mitatitra olona makany ivelany na mitondra olona miditra aty amin’ny fari-dranomasina na sisitany malagasy avy any ivelany.
Apetraka ny manifolds amin’ny seranan-tsambo fiaingana sy fiantsonana rehetra ary tsy maintsy fenoina an-tsakany sy andavany raha misy fidinana na fialana eny an-dalana.
Tsy maintsy andrarahana fanafody famonoana otrikaretina ny sambo fitaterana rehetra alohany fiaingana ary tsy maintsy misy gel desinfectant avokoa ao anatin’ny Sambo.
Mila manao masque na arovava-orona ny mpandeha tsy akanavaka.
Hajaina avokoa ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana napetraka amin’izao hamehana ara-pahasalamana izao eo amin’ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy.
SEHATRY NY KOLONTSAINA SY FIALAMBOLY
Kolontsaina sy fialamboly
Mahazo misokatra hatrany ny restaurant, ny cabaret, ny espace, ny karaoke ary ny bar fa tsy maintsy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana ary ara-pilaminana rehetra izay mifandray amin’ireo fepetra ara-pahasalamana sy ny fepetra arapahamehana izay noraisina
Afaka misokatra hatramin’ny 11 ora alina saingy tsy mihoatra ny 200 ny olona arakaraky ny toerana fandraisana olona.
Hisy ny fanarahamaso hentitra an’ireo toerana ireo ka raha misy ny tsy fanajana ireo fepetra ireo dia akatona avy hatrany.
Ny boite de nuit na ny toerana fandihizana kosa anefa dia mbola tsy afaka misokatra noho ny fifampikasohana akaiky manamora ny fifandran’ny aretina.
Afaka misokatra hatrany ny toerana azo tsidihiny mpizahan-tany sy ny daholo be toy ny Rova, ny lapa, ny galerie d’art sns tsy mahazo mihoatra ny 200 olona isaky ny fidirana kosa anefa , mila hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana.
Afaka misokatra hatrany ny salle de cinema fa tsy mahazo mihoatra ny zato ny ao anatin’ny efitrano isaky ny miditra, mila hajaina hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana.
Afaka misokatra hatrany ny fiangonana sy ny mosquée amin’ny faritra rehetra manerana ny nosy saingy tsy maintsy manaja hatrany ireo fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana toy ny fanajana ny elanelana iray metatra, ny fanaovana ny masque na arovava-orona, na ny fakana ny maripana eo am-pidirana, ny fampiasana gel désinfectant, ny tsy fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana ary ny fandrarahana ny ranom-panafody mamono otrika’aretina.
LES ACTIVITES DU CRCO SAVA
La désinfection se poursuit
Mitohy hatrany ny désinfection eraky ny fokontany maro eto Antananarivo toy ny teny amin’ny Fokontany Antoamadinika III G hangar sy Fkt Antoamadinika atsimo (bureau Fkt,…
31/07/2020 5:05 ·
La désinfection continue
Mitohy hatrany ny famendrahana fanafody (désinféction) eraky ny faritra maro ato amin’ireo Boriborintany maro ato Antananarivo Renivohitra mba hisorohana ny fiparitahan’ny tsimok’aretina Covid-19
22/07/2020 10:14 ·
Dons de matériels pour le CRCO Analamanga
Amin’ny anaran’ny Minisiteran’ny Angovo sy ny Akoranafo,Amin’ny anaran’ny Ministra Ramarolahy Christian,Izahay izay nosoloin’ny Sekretera Jeneraly Andriatongarivo Andry, dia nanolotra fitaovana entina miady amin’ny Corona toy…
16/07/2020 3:14 ·
Reunion CRCO Analamanga
Nivory teto amin ny Biraon ny FARITRA ANALAMANGA anio ireo Tompon Andraikim panjakana rehetra eto Analamanga.Izay notarihan ny GOVERNORA Hery RASOAMAROMAKA ary naitana ny solon…
09/07/2020 8:19 ·
Distribution de Covid Organics et désinfection dans le 5ème arrondissement
Nitohy teny amin ny Boriborin tany faha V ny fizarana Covid Organics ho an ny vahoaka rehetra anio sy ny fanondrahana fanafody manerana ny tanana…
09/07/2020 8:50 ·
Distribution de COVID Organics à l’ANS Ampefiloha
Efa manomboka ary mizotra tsara am-pilaminana ny fizarana Tambavy CVO Covid-Organics etsy amin’ny ANS Ampefiloha.Tsy misy ny fitangoronana fa manaraka tsara ny fandaminana ny rehetra
09/07/2020 8:02 ·